အပြုံးချိုချို နဲ့ ဆေးတံတို | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » အပြုံးချိုချို နဲ့ ဆေးတံတို
အပြုံးချိုချို နဲ့ ဆေးတံတို
Posted by ကျော်စွာခေါင် on Aug 1, 2013 in Arts & Humanities | 29 comments
ဆေးတံကိုစွဲမြဲစွာသောက်တတ်တဲ့ ချင်း အဘွားအိုပါ..။
တောင်ယာအလုပ်တွေ လုပ်ကိုင်ပေမယ့် မောပန်းနေတဲ့ကြားက ပြုံးရယ်နေလိုက်ပုံက ချစ်စရာကောင်းလွန်းလှပါတယ်..။
သူတို့ ရဲ့ဘ၀မှာ.. ဆေးတံက ကြီးဖော် ကြီးဘက်လို့ တောင် တင်စားရပါမယ်..။
အပျိုအရွယ် မတိုင်ခင်ကတည်းက ဆေးငုံကြတယ်.. ဆေးတံသောက်ကြတယ်..။
ကျနော့်အမျိုးတွေရှိတဲ့ တောင်ငူ က ရှမ်းဝတီးရွာကို သွားလည်တော့ ညီမ၀မ်းကွဲ ရှမ်းမလေးတွေ ဆေးတွေ ငုံလို့ .. ကွမ်းဝါးတာတောင် သီးနေတဲ့ ကျနော့်ကို ၀ိုင်းရယ်လိုက်ကြတာ..။
ညီမ တယောက်ကို ဆေးတံ သောက်လို့ရောဂါ ဖြစ်မယ်နော်လို့ကျနော်ကပြောတော့.. သူကလည်း အလာကြီးဘဲ..
“ ညီ… ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းက စောစောသေမယ်..
ချစ်ညီမ ပူတူးသို့အမှတ်တယ
စဉ်းစားနေတာ။သူကြီး ဆာဗာဒေါင်းသွားလို့ ပန်းချီဆြာလည်းပြေးသွားပြန်ပြီလို့။ အလင်းရောင်ကျပုံကိုရေးထားတာ အရမ်းသဘောကျမိ ပါတယ်။ ဆေးတံသောက်တာမြင်ဘူးပေမဲ့အဲ့လိုအရွက်အုပ်ထားတာမမြင်ဘူး ဘူးရယ်။ ကချင်သူချောချောလေးတွေရဲ့ ပုံရောဆွဲလားဟင်။
ပုံလေးက တိုင်းရင်းသားပင်ကိုယ်အလှနဲ့ ရိုးရာ အလှလေး ပေါ်လွင်မယ် ဆိုရင်.. ဆွဲချင်ပါတယ်..။
ငယ်တုန်းက ကျနော်နေတာကလည်း ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ နီးပါတယ်..ကသာမှာ ၆လလောက် နေဘူးတယ်..။
ကချင်လူမျိုးလဲ ရိုးသားပါတယ်.. သူငယ်ချင်းတချို့ ရှိတယ်.. မတွေ့ ရတာ နှစ်တွေ ကြာလှပါပြီ..။
ပြောရမယ် ဆိုရင်တော့ ကချင်လူမျိုးရဲ့ ကျေးဇူးတရား ကျနော့် အပေါ်မှာ ရှိပါတယ်..။ ကချင်ပုံလေးတွေ ဆွဲပြီး တတ်တဲ့ပညာနဲ့ 
အဲဒီပန်းချီဆရာ မီးခိုးကို တော်တော်ပိုင်တယ်။
ခေါင်းပေါင်းနောက်က ထွက်နေတဲ့ ဆံပင်ဖြူလေးတွေ အထိ အသေးစိတ်သကိုးးး
မခိုင် ဆံပင်တွေ ဖြူတဲ့အခါကျ အသေးစိတ်ပုံတူ ဆွဲပေးဦးမှာ…..။
တူလေးက တော် တယ်ဆိုရင်..
ဗုံဗုံ ဘာလုပ်မလို့ လဲဟင်…။
ဒီကလေးမ….. တတူတူနဲ့ ..။
ဂျစ် လို့ပါလေ… မေ ..ဂျစ်လို့ပါလေ….
အူးလေးကလည်း…. မသိချင်ယောင် ဆောင်ပြန်ဘီ..
ပန်းချီတော့ ကြိုက်သွားပြီဗျာ။ အတော်အသေးစိတ် ပီပြင်အောင်ဆွဲနိုင်ပါပေတယ်။
ဆေးလိပ် ဆေးတံဆေး ကွမ်းနပ်ဆေး အဲဒါတွေအားလုံးမှာ ဆေးရွက်ကြီး သို့မဟုတ် ဆေးရိုး ပါတာမို့ ကျန်းမာရေးကတော့ အနည်းနဲ့ အများထိခိုက်တာပါဘဲ။ မျိုချတာ ရှုရှိုက်တာ နဲ့ မှုတ်ထုတ် ထွေးပစ်တာ အဲဒီမှာ ခန္ဓာကိုယ်ထဲရောက်မှု အနည်းအများ ကွာသွားတာပါဘဲလေ။
အားပေးချီးမွမ်းတာ ကျေးဇူးပါ ကိုခ။
ဟုတ်ပါတယ် ဆေးလိပ်..ဆေးရွက်..ဘာမှ မကောင်းပါဘူး..ညီမက ကျနော့်ကို ရယ်စရာ ပြန်ပြောတာလေး သတိယလို့ ထည့်ရေးတာပါ..။ ခု ချိန်တော့ တိုးတက်နေမှာပါ.. အဲဒိတုန်းကဆို တောကွမ်းတော့ ..ရှိပေမယ့် ကွမ်းယာ အချိုတွေ ဘာတွေ စားချင်ရင် တောင်ငူတက်ဝယ်မှ စား၇တာ.. ရွာမှာ ဘာမုန့် မှ မရှိဘူး.. လဘက်ရည် သောက်ချင်ရင် တောင်ငူထိ ၄မိုင် ခရီး ကို စက်ဘီးနဲ့ သွားသောက်ရတာ ကျနော့်မှာ..စက်ဘီးနင်းပြီးပြန်လာရင် ဗိုက်ထဲမှာ ဘာမှ မရှိတော့ဘူး…။
သူတို့ အတွက်က မုန့် ပဲသွားရည်စာ လဲ ဘာမှ မရှိ မလို..ဆေးဘဲ ငုံကြတာ..။
ဆြာခေါင်ရဲ့ ပန်းချီလက်ရာက အတော် အနုစိတ်တာပဲ…
ဆေးတံဆိုလို့ ငယ်ငယ်က အဖိုးလေးရဲ့ဆေးတံကို လျှာရှည်ပြီး ဂျီးဆေးပေးလိုက်တာ…
သူ့ခမျာ ဆေးဂျိုးတက်အောင် နှစ်ရှည်လများ မွေးထားရတာတဲ့…
ရာဇ၀င် မသိရင် ဆေးတံ မထိနဲ့ တဲ့…။
ဆေးတံကြီး ခဲ ချင်မိသေးတယ်
ကျနော် ပြန်တင် လိုက်ပါပြိ.. ကျနော် ထင်တာက ကျနော့်ကွန်ပြူတာမှာဘဲ မပေါ်ဘူး ထင်နေတာ…။ ဒါကြောင့်ကိုးးးး။
ကျနော့် အရင် ဦးတာနော်။
ဆံပင်ကို ဟိုင်းလိုက် အဖြူရောင်ဖောက်ပလိုက်မယ်တော့။
ပန်းချီ ဆရာကြီးကို ပူဆာကြစို့ မမ။
မီး ပုံတူ ဆွဲပေးပါ။
မီး ပုံတူ ဆွဲပေးပြီးရင် သရဲခြောက်ခံရရင်ကို ကြောက်တတ်တော့မှာဟုတ်ဘူးလို့ အာမခံပါတယ်။
ပန်းချီဆရာက ပုံတူအောင် လှအောင် မဆွဲပေးနိုင်လို့တဲ့ အသံတောင် မထွက်နိုင်ရှာဘူး။ :loll:
ခိုင်ဇာ့ နောက်ကလိုက်ခြင်း…….ကျမ လည်းပုံတူအပ်ချင်တယ်။
ဆရာခေါင် က စွယ်စုံရ အနုပညာပါရမီရှင်…
စာရေး၊ ကဗျာရေးလည်း အရမ်းကောင်း၊ သဘင်အကြောင်းလဲ တဖက်ကမ်းခတ်…
ရွာထဲက ခလေးတွေ၊ ကဗျာပြခန်းအတွက် ဆရာခေါင်ဆီက တောင်းကြပါဦး…
အကိုကြီး… ရွာထဲရောက်လာတာ အရမ်းဝမ်းသာဂုဏ်ယူ မိပါတယ် ခင်ဗျ…
ပြောင်းဖူး ဆေးလိပ်ဂျီးဒေါ့ သောက်ဖူးဒယ် …
အိုက်လို ဆေးတံဂျီး သောက်ဖူးသေးဘူးးး
ပန်းချီဆွဲပြီးရင် အိုက်ပုံတွေကို ပြခန်းပို့ပါသလား ခေါင်..
ခုမှ မြင်ဖူးတယ်ဆိုပေမယ့် အင်မတန် ကောင်းမွန်တဲ့လက်ရာ တစ်ခုလို့ ခံစားရပါတယ် ခေါင်..
ခေါင့်အနေနဲ့ ပုံတူ ပန်းချီတွေ ရှုခင်းပန်းချီတွေကိုရော ဆွဲလေ့ရှိပါသလား ခေါင်..
ရွာထဲက ပန်းချီပညာရှင် ခေါင် နဲ့ ဆုံရလို့ ဝမ်းသာပါတယ် ခေါင်..
အဟဲ. .ကန်တော့ . . နောက်တာ .. ငယ်ငယ်ကတော့ ရူးဖူးတယ် .. စာသင်ချိန်မှာသူငယ်ချင်းပုံတွေကို သူတို့ မသိအောင် ဆွဲထား .. ပြီးမှ ဒါဘယ်သူလဲ သိလား ဆိုပြီးတော့ မေးကြည့် .. မှန်သွားရင် အလွန်ပျော်၏။ . အခုတော့ အဲဒါတွေက လျှောသွားပါပြီဗျာ
“ ဒါနဆန် မေတ္တာ ရပ်ခံအပ်ပါတယ်..ခေါင် ”
ထန်းရည် ချတဲ့ ဆရာလေး. ( ဘွဲ့ … လူကလေးမ )
တွန့်နေတဲ့ အသားအရေ တွေ နဲ့ အဖွားအို ရဲ့ ပြုံးနေတဲ့ ရိုးစင်းလှတဲ့ မျက်နှာ လေး အပြင် လွင့်နေတဲ့ ဆေးတံအငွေ့ တွေက တကဲ့ အသက်ဝင်လွန်း တဲ့ ဓာတ်ပုံ တစ်ပုံပါဘဲ။
ဒါပေမဲ့ အဲဒါက ပန်းချီကားတစ်ချပ်ဖြစ်နေတယ်။